ခရစ္စတီယာနိုလား? လီယွန်နယ်လား? ဂရင်းဝုဒ်ပြောပြီ – Sports A2Z
ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ လီယွန်နယ် မက်ဆီတို့က ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာတဲ့အထိ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တွေ ပြိုင်နေခဲ့တဲ့ အာဂလူသားတွေဖြစ်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ သူတို့ကြား နှိုင်းယှဉ်မှုတွေက ဇာတ်ရှိန်ပိုတက်လာခဲ့တာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာ ဘယ်သူက ပိုကောင်းသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက်လည်း တစ်ယောက်တစ်မျိုးထွက်နေခဲ့ကြပြီး ဘောလုံးလောကမှာ အငြင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် အခုထိရှိနေသေးတာပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ဖွား ဂရင်းဝုဒ်အတွက်က ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့မက်ဆီ ဘယ်သူပိုကောင်းသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် ဖိအားလည်းရှိပြီး ပြောဖို့လည်း ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် “ဘောလုံးလောကရဲ့ GOAT ကြီးနှစ်ဦးမှာ ဘယ်သူ့ကို ပိုကြိုက်သလဲဆိုတဲ့အမေးအဖြေကဏ္ဍ”မှာ ပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီထွက် တိုက်စစ်မှူး ဂရင်းဝုဒ်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေက မေးလာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အမြင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
သူက “ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အမြဲတမ်း ဒီအဖြေက လီယွန်နယ် မက်ဆီပဲ။ သူက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒီကမ္ဘာကကို မဟုတ်တာဗျ။ တခြားဂြိုဟ်က ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း တကယ့်သိသိသာသာကို အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ ကစားသမားပါ” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက “မက်ဆီက ဘာစီလိုနာနဲ့ အာဂျင်တီးနားအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေကို ကြည့်လိုက်ဦး။ သူက အားလုံးရဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ရောက်နေပြီ” လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ဘောလုံးအလှပြကျော်ဖြတ်မှုတွေမှာ ဘယ်သူ့ကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ်မှာတော့ သူက ရော်နယ်လ်ဒိုလို့ ဖြေခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ ကစားခဲ့ပြီး ဘယ်လွန်ဒေါဆု အရယူခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီသားတော့မဟုတ်ဘဲ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးကို ရည်ညွှန်းခဲ့တာပါ။
ဂရင်းဝုဒ်က “ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအကွက်ကတော့ ခြေယောင်ပြလှည့်စားတာပဲ။ ဒီနေ့အထိ အသုံးပြုနေတုန်းပဲ။ ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်လ်ဒိုကစားတာကို ခဏခဏကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်တာ။ သူကတော့ နောက်ခံလူတွေရော ဂိုးသမားကိုပါ အဲ့ဒီအတိုင်း ကျော်ဖြတ်ပြခဲ့တာ”လို့ ပရိသတ်တစ်ယောက်မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက “ကျွန်တော်ကတော့ ပန်းခြံတွေမှာ လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာ စမ်းလုပ်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ တကယ့်ပွဲမှာပါ လုပ်တော့တာပဲ။ အခုတော့ အကျင့်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ အကွက်တစ်ကွက်ပါပဲ”လို့ ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးလူငယ်သူရဲကောင်းလေး မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ အဖြေအပေါ်ကို ဘောလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်ကြရဲ့လားဆိုတာကတော့…
ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုနဲ႔ လီယြန္နယ္ မက္ဆီတို႔က ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ေတြ ၿပိဳင္ေနခဲ့တဲ့ အာဂလူသားေတြျဖစ္ၿပီး ေရာ္နယ္လ္ဒိုအေနနဲ႔ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ သူတို႔ၾကား ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြက ဇာတ္ရွိန္ပိုတက္လာခဲ့တာပါ။
ဒါေပမယ့္ ” ေဘာလုံးေလာကရဲ႕ GOAT ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ ဘယ္သူ႔ကို ပိုႀကိဳက္သလဲဆိုတဲ့အေမးအေျဖက႑”မွာ ပါဝင္ဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ယူႏိုက္တက္အကယ္ဒမီထြက္ တိုက္စစ္မႉး ဂရင္းဝုဒ္အေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ေမးလာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔အျမင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ။
သစ္သားစိမ္းေလးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကတဲ့ ဂရင္းဝုဒ္ရဲ႕အေျဖအေပၚ ေဘာလုံးပရိသတ္ေတြ စိတ္ေက်နပ္ၾကရဲ႕လားဆိုတာကေတာ့…